I-China Ninja Course yokukhiqiza kanye neFektha | Izinsimbi Zokudlala zeHaiberi
Izifundo zeNinja ziyizithiyo zesithiyo ezifaka inselelo futhi zithuthukise amandla, ukukhuthazela, ukuhlangana, ubugqwetha nokulinganisela. Abadlali badinga ukusula izigaba eziningi njengeNinja ngaphambi kokufika ekugcineni. Ngokuya ngezinkambu futhi njengoba kudingeka, iqoqo lemishini lingakhetha futhi lifane ngokukhululeka kusuka ezigabeni ezingaphezu kuka-30. I-Ninja Course yisinqumo esihle sokusayina into yokudlala enkundleni yezemidlalo yasendlini.
Inani lemizila nezithiyo ku-Ninja Warrior ngayinye kuncike kumthamo ocelwe iklayenti kanye nosayizi wendawo lapho kuzokwakhelwa khona isifundo. Sinikeza izithiyo ezingaphezu kwama-45 ngamazinga ahlukene wobunzima ezingaphonsela inselelo abantu kuwo wonke amabanga omzimba. Isifundo seNinja siwulungele kakhulu amapaki we-trampoline, ama-FEC, izikhungo zemidlalo, izindawo zokuqeqesha noma indawo yokuzivocavoca ekhuphuka.
Izifundo zeNinja ziyizithiyo zesithiyo ezifaka inselelo futhi zithuthukise amandla, ukukhuthazela, ukuhlangana, ubugqwetha nokulinganisela. Ikhosi yeNinja ivumela izivakashi ukuba ziqeqeshe, zincintisane futhi zihlukane endaweni emnandi futhi ephephile. Inani lemizila nezithiyo kuKosi ngayinye yeNinja kuncike kumthamo ocelwe iklayenti kanye nosayizi wendawo lapho kuzokwakhelwa khona isifundo. Sinikeza izithiyo ezingaphezu kwama-45 ngamazinga ahlukene wobunzima ezingaphonsela inselelo abantu kuwo wonke amabanga omzimba. Isifundo seNinja siwulungele kakhulu amapaki we-trampoline, ama-FEC, izikhungo zemidlalo, izindawo zokuqeqesha noma indawo yokuzivocavoca ekhuphuka.
• Ukuphakama: 15-30 cm (5.9-11.8 in)
• Kulula ukuyihlanza futhi uyigcine
• Izinketho zemibala eminingi
2. Isiponji Esingaphezulu
• Ukuphakama: 30 cm (11.8 in)
• Kuvikelwe Ngaphezulu
3. Ipulatifomu, ukugoqa ikholomu
Amapulatifomu phakathi kwezingqinamba nezinsika ahlanganiswa ngogwebu ukunciphisa ubungozi bokulimala.
Amanetha okuphepha angafakwa emaphethelweni enkambo ukuze kuphephe ukuphepha futhi anconyelwe izifundo eziphakeme. Ziwusizo ikakhulukazi lapho inkambo iseduze nezinye izinto ezikhangayo.
Izifundo zeNinja ziyizithiyo zesithiyo ezifaka inselelo futhi zithuthukise amandla, ukukhuthazela, ukuhlangana, ubugqwetha nokulinganisela. Ikhosi yeNinja ivumela izivakashi ukuba ziqeqeshe, zincintisane futhi zihlukane endaweni emnandi futhi ephephile.
Inani lemizila nezithiyo kuKosi ngayinye yeNinja kuncike kumthamo ocelwe iklayenti kanye nosayizi wendawo lapho kuzokwakhelwa khona isifundo. Sinikeza izithiyo ezingaphezu kwama-45 ngamazinga ahlukene wobunzima ezingaphonsela inselelo abantu kuwo wonke amabanga omzimba. Isifundo seNinja siwulungele kakhulu amapaki we-trampoline, ama-FEC, izikhungo zemidlalo, izindawo zokuqeqesha noma indawo yokuzivocavoca ekhuphuka.
Esedlule: Ipaki leTrampoline
Olandelayo: I-Big Ball Pool